प्रश्न गरौं - मुक्त आकाश - साप्ताहिक
झट्ट सुन्दा जाबो प्रश्न जसले नि गर्छ नि भनेजस्तो लाग्छ तर होइन, हामी धेरैलाई प्रश्न सोध्न डर लाग्छ । मनमा कति कुरा सोध्न मन लागेको हुन्छ तर सोध्न नसकेको वर्षौं भैसक्छ । कति पटक त प्रश्न सोध्न भन्दा पनि उत्तर के आउला भनेरै प्रश्न सोध्न डराउँछौं हामी । अब भन्नुस् त के प्रश्न सोध्न सजिलो छ ? के उत्तर सुन्न सजिलो छ ? के तपाईंको मनमा पनि प्रश्नहरू छन् ?
सानो छँदा छात्रछात्राहरूले प्रश्न सोध्न थाले शिक्षकहरू डराउँथे । साना केटाकेटीले संसारकै शक्तिशाली प्रश्नहरू सोध्छन्, जसको उत्तर दिने हिम्मत धेरै शिक्षक तथा आमाबाबुसँग हुँदैन । धेरै प्रश्नको उत्तर त उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, त्यसैले धेरै नबोल् चुप लागेर बस् भनेर सातो लिइन्थ्यो । प्रश्नै सुन्न नसक्नेहरू संसारका सबैभन्दा काँतर मानिस हुन् । नयाँ प्रश्नहरूले नै नयाँ आविष्कार जन्माउन सक्छन् । प्रश्नले नै मानिसलाई सोच्न बाध्य तुल्याउँछ र नयाँ ज्ञानको खोज हुन्छ । विद्यार्थी जीवनका परीक्षामा जबरजस्त धेरै प्रश्न सोधिए र उत्तरहरू लेखाइए, तर कैयन् प्रश्न विद्यार्थीहरूले सोध्नै पाएनन् र उत्तरको खोजी पनि गरिएन ।
कैयन् वैज्ञानिक तथा दार्शनिकले पुरानो मान्यताविरुद्ध प्रश्न गर्दा मृत्युवरण गरेको इतिहास पनि छन् । उनीहरूले प्रश्न गर्ने हिम्मत नगरेका भए आजसम्म धेरै कुरा सुल्झने थिएनन् । प्रश्न नभएको मानिस हुँदैन । ऊ उत्तरको खोजीमा भौंतारिइरहन्छ । कतिसम्म भने हामीमध्ये धेरैसँग आफंैलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत हुँदैन । आफू के गरिरहेछु ? किन गरिरहेछु ? किन कुदिरहेछु ? के पाइरहेछु ? के गुमाइरहेछु ? ठीक गरिरहेको छु कि गलत गरिरहेको छु ? धेरै कुराको उत्तर आफैंसँग हुन्छ तर मान्छे बाहिर–बाहिर उत्तर खोज्दै हिंड्छ । आफू अपराध गर्छ तर अरूलाई दोष लगाएर हिंड्छ । जुन दिनदेखि मानिसले आफैंसँग प्रश्न गर्न थाल्छ त्यो दिन धेरैका धेरै प्रश्न हराउँछन् । अक्सर आफैंलाई ढाँटेर बाँचिरहेका मानिसहरू आफंैलाई प्रश्न गर्न डराउँछन् । त्यसपछि हामी आफ्नै घरभित्र पनि प्रश्न गर्न डराउँछौं ।
घरभित्रै कुनै सदस्यको काम–कुरा अर्कोलाई चित्त बुझेको हुँदैन, तर किन यस्तो गरेको वा के भैरहेको छ भनेर प्रश्न गर्न हच्किन्छौं । प्रश्न गर्दा कतै रिसाउँछ कि चित्त दुखाउँछ कि गलत सोच्छ कि भनेर ती प्रश्न मनमै गुम्स्याएर राख्छौं । अर्कातर्फ भने कसैले प्रश्न सोधिदिए बरु उत्तर दिन्थें नि भनेर सोचिएको हुन सक्छ । कोही प्रश्न कुरेर बसेको हुन सक्छ । कहिलेकाहीं उत्तर दिन पनि प्रश्नको खाँचो पर्छ । आजसम्म मेरो इच्छा चाहना के छ के थियो भनेर कसैले सोध्यो भनेर प्रश्नको आशा गर्नेहरू नजिककै मानिसहरू हुन्छन् जो कसैले केही नसोधिदिएर जीवनभर छट्पटाएका हुन्छन् । त्यसैले प्रश्न सोध्न डराउनु हुँदैन । के तिमीलाई सन्चै छ ? के तिमी खुसी छौ ? के तिमीलाई कुनै समस्या छ ? जस्ता सामान्य प्रश्न गरिँदा पनि धेरैले मन फुकाएर गफ गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् वा मनको वह पोख्ने अवसर पाउँछन् । जसले प्रश्न सोधिदिनुपर्ने हो उसले नसोधेकै यो संसारका धेरै मानिसहरू उत्तर दिन नपाएर काकाकुल भएर बाँचेका छन् ।
प्रेमीहरूका मनमा प्रश्न छन् । छोराछोरीका मनमा प्रश्न छन् । आमाबाबुका मनमा प्रश्न छन् । जनताका मनमा प्रश्न छन् । नेताका मनमा प्रश्न छन् । प्रश्न सोध्न नसकेर घरबार बिग्रिएका र प्रश्न सोधेर दरबार बिग्रिएको हामीले देखेकै छौं । भर्खरै नेपालमै पनि डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध प्रश्न सोधेर देश हल्लाएका छन् । प्रश्नमा ठूलो शक्ति लुकेको हुन्छ । प्रश्न सोध्ने भन्दैमा जथाभावी प्रश्न गर्दा सही वा खोजेको उत्तर नआउन सक्छ । कुन प्रश्न कतिबेला कोसँग सोध्ने हेक्का राखिएन भने उत्तरको झटारोले आफैंलाई प्रहार गर्न सक्छ । कुनै प्रश्नले समस्या हल गर्छन् भने कुनै प्रश्नले समस्यालाई थप बल्झाउँछन् । पहिले–पहिले श्रीमतीहरूले श्रीमान्लाई प्रश्न गर्नै पाउँदैनथे, अझ भनौं महिलाहरूले नै प्रश्न गर्न पाउँदैनथे । अचेल उनीहरू पनि प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन् उचित उत्तर नपाए छोडेर वा स्वतन्त्र बस्न सक्ने हिम्मत बटुलेका छन् ।
प्रश्न गर्न नडराउँ । अरूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा अघि पहिले आफैंलाई प्रश्न गरौं । आफूबाट उत्तर आएन भने बल्ल अरूसँग प्रश्न सोधौं । प्रश्न सोध्दैमा उत्तर आउँछ वा उत्तर दिनैपर्छ भन्ने छैन, तर प्रश्न सोध्न चाहिं नछोडौं । जसरी जहिले जहाँ हिम्मत र मौका आउँछ, प्रश्न गरौं ताकि सोधेको भए हुन्थ्यो कि भनेर पछि पश्चाताप नहोस् ।